Booster Raiders bụ onye egwuregwu ọtụtụ dị na Super Mario Run | Gam akporosis
Site na ndị okike nke mkpụrụ osisi Ninja na Jetpack Joyride: Booster Raiders na ọnlaịnụ ha megide ndị egwuregwu 4
Booster Raiders bụ egwuregwu rutere izu ole na ole gara aga, na nke taa bụ oge iji mee ka ọ gafee usoro ndị a iji kwuo okwu banyere egwuregwu ya kachasị mma. A aha nke sitere n'aka ndị okike nke Fruit Ninja, Jetpack Joyride na Dan the Man, ya bụ, kachasị mma na ngwaahịa ha ọ bụla.
Ya mere, ọ na - eme na Booster Raiders na na-etinye anyị n'ihu onye na-egwu egwuregwu n'ịntanetị iji kpọọ egwuregwu 3 ndị ọzọ na Super Mario Run. Nke ahụ bụ, anyị ga-elekọta onye na-agba ọsọ anyị dabere na mmegharị na igodo pụrụ iche mgbe ọ na-akwụsịghị ịgba ọsọ, ma si otú a gbalịa inweta mmeri ahụ.
1 Ihe odide ama ama ama Halfbrick niile na otu egwuregwu
2 Jiri nkà gị nke ọma na Booster Raiders
3 Ọdịnaya anaghị efu
Ihe odide ama ama ama Halfbrick niile na otu egwuregwu
Halfbrick Studios egosila anyị na, dị ka Supercell, mma iji nweta egwuregwu ole na ole, mana elu mma, na a otutu otutu na na ha na-mediocre. Onye ọ bụla na utu aha anyị na-akpọ na gam akporo ejikọtala anyị n'ụzọ nke na anyị nwere karịa ezigbo ebe nchekwa. Onye ikpeazu bu Dan the Man na ndị karateka kicks nke ya na-akpa ọchị agwa.
Oge a ha na-ewetara anyị nye ihe odide nile nke egwuregwu obula na Booster Raiders na agbụrụ ọtụtụ nke anyị ga-eche ndị egwuregwu 3 ọzọ ihu. Iji mee nke a, anyị ga-eji ụfọdụ ndị pụrụ iche nkà na isi mmegharị.
Eziokwu bụ na n'oge ụfọdụ na-echetara anyị nnukwu Super Mario Run, ọ bụ ezie na ha dị anya. Anyị na-eji mmegharị elu ma ọ bụ ala ịgagharị site na ọkwa dị iche iche nke nyiwe ahụ, anyị ga-enwekwa ikike pụrụ iche abụọ n'aka anyị iji ha mee ihe n'oge kachasị mma.
Jiri nkà gị nke ọma na Booster Raiders
Ekwesịrị ikwu ya ndị nkà fanye n'ime sekọnd, ya mere, anyị ga-enwe nkà iji jiri ha n'otu oge na anyị gafere site na map dị iche iche nke anyị ga-egwu. Site n'ụzọ, enwere ụdị ha niile na anyị nwere ike ịgagharị site na mgbasa dị ka ndị nwere mmalite na njedebe na-ekwughachi onwe ha.
Dịkwa ka ọ dị na map ndị ahụ, e nwere ikike dịgasị iche iche ndị e jikọrọ nke ọ bụla n’ime mkpụrụ akwụkwọ ndị anyị nwere ike iji nwayọọ nwayọọ nweta. Enwere ike inweta nkà ndị ahụ ka anyị na-aga n’ihu n’ọkwa agwa ma ọ bụ kaadị. Na ee, anyị na-eche freemium nke egwuregwu a, n'agbanyeghị na ọ dịghị amanye anyị ka anyị jiri ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ.
Ihe adabatara bu ka imata ikike nke ihe odide obula ina enweta, ebe obu na ihe eji ihe na agbanwe otutu. ọkụ eletrik nke enwere ike iji ya mee ihe na mpaghara ahụ, na-ewepụta ụfọdụ egbe egbe ị na-ahụghị. N'ebe a, eziokwu bụ na Booster Raiders jisiri ike mee ka anyị nwee ike zuru ezu na ọtụtụ ihe anyị maara site na egwuregwu ha ndị ọzọ.
Ọdịnaya anaghị efu
Dị ka anyị na-ekwu, Halfbrick Studios mgbe niile Ejiri mara ya inwe oke ọdịnaya ị kpọghee n'egwuregwu ha. E wezụga ya oké gameplay, mgbe ahụ, ọ na-anọgide ka anyị na-enweta ndị ikike. Nke pụtara na anyị ga-aga n'ihu na-akpọ ya ụbọchị na izu. Ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a ọtụtụ egwuregwu ya, anyị ga-enwe egwuregwu ruo nwa oge.
Ya mere, anyị ga-enweta na teknuzu nke Booster Raiders na nke anyị nwere ike ịkụ aka maka ịgbaso otu ọkwa ahụ ogo nke aha ndi gara aga. Dynamicfọdụ ike egwuregwu seasoned site na ha oké arụmọrụ, graphic larịị na na usoro nke visual mmetụta na nkà na-ekwe ka anyị nwere oké oge nke play. Anyi agaghi ekpughe ihe obula anyi n’amaghi banyere ogwugwo ihe omumu a di na egwuru-egwu obula o na ebute. Iwepu okpu ya.
Halfbrick Studios na-ewetara anyị Booster Raiders dị ka nnukwu egwuregwu dị egwu maka egwuregwu ọsọ ọsọ nke anyị ga-ebu ụzọ rute n'ọsọ iji nweta mkpụrụ ego karịa, wee sikwuo ike nweta ọdịnaya, ọdịnaya na ikike pụrụ iche. Have nwere ya n'efu na Storelọ Ahịa Play, yabụ na-ewe oge iji wụnye ya.
Ndị Raiders na-akwalite
Onye edemede: 77%
Onye edemede: 73%
Onye edemede: 79%
Ọtụtụ ọdịnaya ị kpọghee
Ọ na-eme ka ị banye n'ime egwuregwu
Onwe ya akara akara
Loot igbe n'agbanyeghị na ha adịghị mkpa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Site na ndị okike nke mkpụrụ osisi Ninja na Jetpack Joyride: Booster Raiders na ọnlaịnụ ha megide ndị egwuregwu 4
LG na-akwadebe mwepụta nke mbadamba G Pad 5 ọhụrụ ya na ihe nhazi ochie
Fairphone 3 bụ ekwentị kachasị mfe ịrụzi na ahịa